Xirmooyinka alaabtu ma aha oo kaliya khibradda muuqaalka ee macaamiisha ku xiran badeecada, laakiin sidoo kale waa muujin toos ah shakhsiyadda sheyga. Baakadaha waa jaakad soo jiidasho leh oo alaabooyin wanaagsan ah iyo hab muhiim ah oo lagula wareegi karo suuqa. Meelaynta sax ah iyo pac wax soo saarka bilicsanaanta ...
Maxay dad badani ugu sii badan yihiin isticmaalka dhalooyinka aluminiumka?
Nolosheena maalinlaha ah, soodhada qasacadaysan ee aan aragno waxay ku jiraan dhalooyinka aluminium halkii ay ka ahaan lahaayeen caagagga caadiga ah. Sababta Dhalooyinka aluminiumku aad iyo aad ayaa loo adeegsadaa nolosheena, waxaana jira adeegsiyo badan, laakiin waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka dhalooyinka aluminiumku? 1. Acid iyo alkali iska caabin, miisaan fudud ....
Fiiro gaar ah! Qiimaha xamuulka ayaa mar kale kor u kici kara
Kanaalka Suez waa mid ka mid ah marinnada gaadiidka ee adduunka ugu muhiimsan. Wadadani waxay isku xirtaa Badda Dhexe iyo Badda Cas. Waxay muhiim u tahay ganacsiga u dhexeeya Yurub iyo Aasiya. Si kastaba ha noqotee, waxaa xayiray markab weyn oo xamuul ah oo xannibmay. Waxay saameyn ballaaran ku yeelaneysaa sh ...
Immisa isticmaal ah tuubada Birta ee nolol maalmeedka?
Tuubada Birta, oo sidoo kale loo yaqaan tuubada aluminium, tuubada tuubada aluminium, tuubada aluminium, iwm Sannadihii ugu dambeeyay, iyadoo bulshada loo jeedinayo fikradda ilaalinta deegaanka, adeegsiga sanado badan oo biibiile ah, beeb caag ah iyo wixii la mid ah si tartiib tartiib ah loogu beddelay tuubada birta aluminium. Kani waa mai ...
Sicirka alaabta ayaa kor u kacaya, khalkhalka silsiladaha ayaa noqda dhibaato
Sida laga soo xigtay Ururka Qandaraaslayaasha Guud ee Mareykanka, kor u kaca qiimaha alaabta iyo waqtiyada dhalmada oo dheereeya ayaa nolosha ku adkaanaya qandaraasleyda iyo macaamiishooda. Sawirka: oksanaphoto / iStock / Getty Images Plus / Getty Images Sida laga soo xigtay falanqaynta xogta dawladda ee American Associati ...
Sidee loo sameeyaa jikadaada mid horumarsan?
Qof kasta oo xirfadle ah, xafiisku waa goobteenna dagaalka waxaana u joognaa inaan wax ka qabanno dhammaan noocyada waxyaabaha khiyaanada leh. Waxa kaliya ee aan dooneyno inaan sameyno shaqada kadib waa inaan ku jiifano fadhiga guriga. Laakiin dumarka, nasiib daro, ma qaadan karno nasiino isla markiiba. Weli waxaa jira goob dagaal oo ku taal gurigeenna-Kitche ...
Aynu eegno sheyga cusub
Waxaa qoray admin on 21-03-06
Miyaad beerataa dhir cagaaran oo aad waraabisaa maalin kasta? Miyaad dareentaa in buufinta dareeraha ahi ay aad u xoog badan tahay markaad maqaarka daryeeshid oo aad qoyso? Miyaad wax dhibaato ah kala kulantay markii aad alaabta biyaha ku nadiifineysay? Halyeeygeena maanta wuxuu kaa caawin karaa xalinta dhibaatooyinkaas oo dhan. Hada aan kuu soo bandhigo pr cusub ...
Ma heshay dalacsiin sanadkan?
Maanta, munaasabaddii ugu horreysay ee dhiirrigelinta EBI ee 2021 ayaa bilaabmaysa! Waqtigu ma dayici doono qof kasta oo geesi ah oo isdaba-joog ah! Ma jiro qof nasiibkiisu ka soo baxayo buluugga. Kaliya waxaan u shaqeynaa si adag, waxaan nasiib u yeelan doonaa. EBI kuma noolaan doonto dadaalkeena iyo adkeysigeena. Raadinta forwa ...
Goorma ayuu yahay tababarkii ugu dambeeyay ee kooxdaada?
Sii wad barashada iyo tranku waa qayb muhiim ah inta lagu jiro shaqadeena. Si loo siiyo khibrad fiican macaamiisheenna, EBI waxay ku casuuntay Monica oo ganacsi ganacsi ka waday muddo 20 sano ah inay noo horseeddo inaan baranno aqoon xirfadeed oo dheeri ah. Waxaan wadar ahaan qaadanay laba maalmood laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 8:00 pm si wada jir ah si loo baadho sida loo ...